Brexit: Maxay tahay waxa ay go'aanka ka gaarayso Maxkamadda Sare ee Britain? - BBC Somali
Brexit: Maxay tahay waxa ay go'aanka ka gaarayso Maxkamadda Sare ee Britain?
Maxkamadda sare ee dalka Britain ayaa maanta soo bandhigaysa go'aankeeda ku aaddan kiiska qodobka 50-aad ee qeexaya hannaanka uu dalkaasi uga baxayo Midowga Yurub.
Ra'iisul Wasaaraha Britain, Theresa May, ayaa sheegtay in dabayaaqada bisha Maarso ay dhaqangelin doonto qodobkaasi 50-aad, dowladduna aanay u baahnayn in tallaabadaasi uu baarlamanka ansixiyo.
Sikastaba ha ahaatee, Maxkamadda Sare ee London, ayaa Nofeembartii la soo dhaafay go'aamisay in ay sharci darro noqon doonto in Theresa May ay kaligeed fuliso qodobka 50-aad ee ka bixitaanka Midowga Yurub iyadoo adeegsanaysa awoodaha fulinta ee loo yaqaan "xaqa boqortooyada".
Haddaba si aannu arrimahan wax badan uga ogaanno ayaa waxaannu wareysannay, Dr Maxamed Cabdi Cumar, oo ah bare wax ka dhiga Jaamacadda London, waxa uu u warramay Cabdifitaax Ibraahim Cagayare oo marka hore waydiiyay waxa ay maxkamaddu go'aanka ka gaarayso?
Maqal Somaliland oo weli baraha bulshadu ku xiriirto ay xiran yihiin
Somaliland oo weli baraha bulshadu ku xiriirto ay xiran yihiin